I-Sonication yeWine - Izicelo ezintsha ze-Ultrasound eWineries
I-Ultrasound yindlela yokucubungula engeyena oshisayo, esetshenzisiwe kakade embonini yokudla ngenxa yesicelo sayo esincane kepha imiphumela ebalulekile kumkhiqizo. Ukuze uthole ama-wineries, i-sonication inikeza izinhlelo ezihlukahlukene ezifana nokukhipha ama-flavour, ama-phenolics nama-colorants, ukuvuthwa kwe-maturation & ukuguga, i-oaking kanye ne-degassing.
Iwayini liyisiphuzo sokuphuza utshwala, esivame ukwenziwa ngamagilebhisi, kodwa nakweminye izithelo (isib. Iwayini le-apula, iwayini le-elderberry) noma izinto ezisekelwe ngesitashi (isb. Irayisi, iwayini lemboni).
Iwayini lingumthengi othandekayo okukhiqizwa kwakhe okudinga inqubo enhle. Ukwenza izinga eliphezulu newayini eliphezulu liyaziwa njengesikhathi esiningi futhi ngaleyo ndlela ibhizinisi elibiza kakhulu. Okokugcina, kunesithakazelo se-winemaker sokusheshisa Ukuvuthwa (ukuguqulwa kotshwala) nokuvuthwa (ukunikeza ama-flavour ezinkimbinkimbi nama-aromas) futhi ukhiqize ngesikhathi esifanayo utshwala obuphezulu ne-taste, bouquet, mouthfeel nombala oyifunayo.
Ultrasonicator enamandla UIP4000 for flow streams ezinkulu
Imiphumela ehlukile ye-Ultrasonics ku-Wine Processing
I-ultrasound yamandla asetshenziselwa iwayini inikeza imiphumela eminingi enenzuzo. Izinhlelo ezibaluleke kunazo zonke zifaka phakathi ukunambitheka kuqinisa we-bouquet yewayini ngokukhipha izingxenye ezicebile, ezifana ne-phenolics ne-aromatics, i oaking, kanye nokusheshisa kwe ukuvuthwa & ukuguga.
Ukukhishwa kwamakhemikhali anamakha namaPhenolic avela kwamagilebhisi
I-Ultrasound yindlela eyaziwa futhi eqinisekisiwe yokukhishwa kwezinto ze-intracellular plant kanye nama-aromatic compounds. Umsebenzi womshini we-ultrasound usekela ukusabalalisa kwama-solvents phakathi kwezicubu. Njengoba i-ultrasound iphula ubude beseli ngomshini we-cavitation shear, yenza kube lula ukudluliselwa kusuka esitokisini kuze kube se-solvent. Ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana nge-cavitation ye-ultrasonic kwandisa indawo ebusweni phakathi kokuqinile nesigaba se-liquid.
Amagilebhisi adumile futhi adinga ukucebile kwabo kuma polyphenols. Lezi zinhlanganisela ze-phenolic (ezifana ne-monomeric flavanols, i-dimeric, i-trimeric, ne-polymeric procyanidins kanye ne-phenolic acid) yamagilebhisi ayaziwa ngezindawo zabo zokulwa nezidakamizwa. Ngokomzimba, zingahlukaniswa ngezigaba ezimbili: ama-flavonoids nama-non-flavonoids. I-flavonoids ebaluleke kunazo zonke ewayini yi-anthocyanins kanye nama-tannins abangela umbala, ukunambitheka nokukhuluma ngomlomo. Phakathi kwama-flavonoids angama-stilbenes afana ne-resveratrol nama-acidic compounds, njenge-benzoic, i-caffeic ne-cinnamic acid. Iningi lazo zonke izinhlanganisela ze-phenolic ziqukethe isikhumba samagilebhisi nembewu. Amandla amakhulu e-ultrasonic akwazi ukukhipha izithako eziwusizo kusuka kumbewu yamagilebhisi kanye nesikhumba ngendlela efanele.
Ekucwaningweni kukaCocito et al. (1995), i-ultrasonication iye yaboniswa njengenqubo ephuthumayo, ephindaphindiwe futhi ehambisanayo ye-extraction yamakhadi ahlanganiswa ku-must newayini. Imiphumela etholakalayo yezingxube ze-composound yi-ultrasonic isizinda yayiphezulu kunaleyo ye-C18 ikholomu yesikhumba (i-resin isizinda).
Ukwethula izinzuzo ze-ultrasonic isizinda, i-ultrasound iyindlela engabizi, elula futhi ephumelelayo ekukhulumeni okuvamile okungekho okushisayo, okushiwo ukucindezela okukhulu kwe-hydrostatic (HP), okucindezelekile kwe-carbon dioxide (cCO2) ne-carbon dioxide ephezulu (ScCO2) nokuphezulu amapulse ensimu kagesi (HELP). Enye inzuzo yiqiniso, ukuthi isizinda se-ultrasonic - ngokungafani nezinye izindlela ezibalulwe ngenhla - zingahlolwa kalula I-Lab noma isiteji esiphezulu. Lezi zivivinyo zinikeza imiphumela yokukhiqiza ukuze i-scale-up elandelayo ingadingi imizamo eminye ekutholeni ukulungiswa okuhle. Ukuze uthole ukukhiqizwa okugcwele kwezebhizinisi, okuthembekile i-heavy-duty ultrasonicators ene-watts engu-16,000 ngayinye ivumela ukwelashwa kwe-sonication kwemifudlana ephezulu kakhulu yevolumu.
Isisetshenziswa esisizakala nge-Ultrasound for the Oaking Wine
Ngesikhathi sesiteji sokugcoba, iwayini lihlangana nezinkuni zemiphongolo (oaking yendabuko) noma ngezinkuni zokhuni ezeneziwe, izinti / izinkuni noma i-oaking powder (okunye okukhiphayo). Izinkuni ezivame kakhulu zokugcoba (ukunambitheka) - ngokusho kwenqubo yenqubo-oki (quercus). Ezinye izinhlobo zezinkuni, ezisetshenziselwa ngokungajwayelekile, ziyi-chestnut, i-pin, i-redwood, i-cherry noma i-acacia. Izakhiwo zamakhemikhali zokhuni zisetshenziselwa ukuthola imiphumela ejulile ngokubhekwa kwewayini ne-bouquet. I-phenols equkethe i-oki ihlangana nama-flavour okhiqiza iwayini, njenge-vanilla, i-caramel, ukhilimu, izipunga noma ama-flavour earthy. Umphumela obaluleke kakhulu unama-ellagitannins (i-tannin ene-hydrolyzable), etholakala ezinhlobonhlobo ze-lignin ezinkuni, njengoba zivikela iwayini ekungcolweni nasekunciphiseni.
Isizinda se-ultrasonic siwusizo esiteji se-oaking yewayini ngenxa yokuthi ukungena kwamanzi kuya kwesakhiwo sezingodo se-powder, chips, izinti noma izinduku kuzothuthukiswa yingcindezi ephezulu kanye nezingcindezi eziphansi ezenziwe yi-ultrasound. Njengoba ngaleyo ndlela ukudluliselwa okukhulu kuzokwanda ngokuphawulekayo, lokhu kufaka isikhathi sokunciphisa isikhathi esifushane nemiphumela ephakeme mayelana nokuvuna. Uma i-oak powder noma i-flavour flavor distillates (i-oaking ehlukile) isetshenziselwa iwayini, amabutho e-ultrasonic ahlinzeka ukuhlakazeka okuhle kakhulu kwezinhlayiya noma amaconsi ewayini ukuze kuthuthukiswe ukukhanya kwamanzi nokukhanya. Lokhu kubaluleke kakhulu ukufeza ukunambitheka okuphezulu kanye nomlomo futhi kunomthelela ekwenzeni isiphuzo sokuphuza utshwala. Ukuthi ukuphikisana nokuguga kubandakanya isikhathi esiningi nendawo ebiza kakhulu ekukhiqizeni i-vinification, kwenza i-ultrasound ibe ngendlela ekhangayo ngokuthakazelisayo njengamadivaysi e-Hielscher ultrasonic enza ukuthi izindleko zokutshala izimali eziphansi, ukuqaliswa okulula futhi okuvelele ukusebenza kahle kwamandla.
I-ultrasonicator UIP500hd for ukwelashwa ultrasonic iwayini
I-Aggomeration Esizayo Yokusiza I-Wine Aging
Ngesikhathi senqubo yendabuko yokuguga yezinkathi zendabuko, ukusabela kwama-molecule ahlukahlukene kwenzeka ewayini. Lokhu kusho ukuthi ama-molecule ayashintsha ngokuvumelana nokuxhumana phakathi komunye nomunye. Isikhathi kanye nomphumela walolu shintsho lwamangqamuzana kuncike ezingxenyeni zewayini nemvelo yakhe. Ngokuvamile, kuvunyelwe ukuthi utshwala buhlakazeka emaqokeni, kepha lokhu akusho ukuthi ukuhlanganiswa kwama-molecule kuzokwenziwa. Njengasewayini ngokwemvelo kuphela amandla aphansi okwenziwe – njengokubambisana nokuxuba - kuyatholakala, izinga lokushintsha kwemvelo lizophela kakhulu. Ngenkathi izithako zivame ukuxhumana, ukunamathisela, nokuguqula izakhiwo zamangqamuzana, azikwazi ukubona ukuxhumana okuphelele, ukuguqulwa, noma ukubopha ezingeni lemangqamu ngenxa yalokho okuphansi kwamandla.
Njengoba iwayini linikiwe (okusho ukufakelwa kwamandla emzimbeni), izithako zinikeza ukusabalalisa okungaguquki futhi okufanayo. Ngokuncoma, iwayini iba yikhiqiza ehambisanayo ne-shelf enwetshiwe impilo esikhathini esifushane kakhulu sokwelashwa. I-homogeneity ivumela ukuxhumana okuphakeme phakathi kwama-molecule futhi ngaleyo ndlela inguquko ephelele kakhulu yamangqamuzana. Lokhu kusho ukuthuthukiswa kokunambitha nekhwalithi.
Ukuhlakazeka: I-bottling engakaqali, amawayini amaningi aphathwa ngezithasiselo, njengezilondolozo (isib. I-potassium bisulfate, i-bisulfate ye-sodium), abahlanza, ama-powders enombala kanye nama-fining agent kanye nama-ameliorants. Lezi zithasiselo zisetshenziselwa ukugwema ukugqotshwa okwesikhashana ngaphambi kokuqothula, ukuphucula ikhwalithi yewayini, ukuqeda ukungabi namandla noma ukusekela inqubo yokuvuthwa. Nge-ultrasonication, lezi zithasiselo zingahlakazeka kakhulu kwiwayini ukuze imiphumela ephakeme yokucubungula iphumelele. Lokhu kuholela ekugcineni kwekhwalithi ephezulu futhi ukunambitheka okungcono - umzamo wawo wonke ama-vintner.
Ukukhishwa kwe-ultrasonic yama-Active Compounds
Iwayini linezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zemithi esebenzayo njengama-tanins, ama-phenolics, ama-flavonoids nezinye, okuyizinto eziwusizo ezisebenzisayo embonini ye-pharma, imboni yokudla nezimonyo.
Ukuguga kwewayini le-Rice Wine ne-Maize Wine: Chang et al. (2002) atholakala ekutadisheni iwayini lelayisi kanye newayini lemboni ukuthi imiphumela eguga yokuphuza iwayini ixhomeke kuhlobo lwewayini. Ngakho-ke ukuguga kwe-irayisi ye-ultrasonic ngokuphathelene ne-pH value, okuqukethwe okuphuza utshwala, i-acetaldehyde, ukunambitheka kanye nezimfanelo zokuzizwa kahle kakhulu kunokuba i-ultrasound eyasiza ukuguga iwayini lemboni. Kuzo zombili, iwayini lelayisi kanye newayini lemboni, isikhathi sokuguga sanciphisa kakhulu (kusukela ku-1 ngonyaka ukuya ku-1 ngesonto noma ngosuku lwesithathu).
Ama-ultrasonicators asezimboni nge-flow-through reactors for the sonication yewayini futhi ijusi.
Ama-Ultrasonic Processors we-Hielscher
U-Hielscher ungumhlinzeki ohamba phambili wekhwalithi ephakeme kanye namadivayisi aphezulu asebenzayo ama-ultrasonic. Amadivaysi e-ultrasonic eyenziwe yi-Hielscher asetshenziselwa amasampula webhu, ukuqhutshwa kwesilinganiso se-pilot noma ukukhiqizwa okugcwele kwesilinganiso ekufinyeleleni okuhlukahlukene kwembonini nocwaningo. Ukuze usebenze okuphelele nokulungiswa kwenqubo ngayinye, i-Hielscher inikeza amadivayisi amaningi ahlukahlukene ama-ultrasonic for the sonication kwanoma yikuphi ivolumu yamanzi, kusuka kumamitha-microliters amaningana ngamakhulu ayi cubicmeters ngehora. Amadivaysi e-ultrasonic angahlolwa kalula ngenqubo yabo yokwenza kahle ngezinga elincane. Ngokuvamile, i I-UIP1000hd (1kW) lisetshenziselwa ukuthuthukiswa kwenqubo yezinga lokugeleza kusuka ku-0.5L kuya ku-1000L ngehora. Kulesi sikali, ukusebenza kahle kokusebenza kungalungiswa ngokushintsha ukuphakama, ukucindezela nokugeleza kwezinga. Ukufakwa noma ukuvuselelwa kwesistimu ye-ultrasound ibe yindlela yokukhiqiza kanye nokusebenza nokugcinwa okulula futhi ngaphandle kokubunzima.
Amandla amakhulu e-ultrasound akhiqiza cavitation zibe iziphuzo. Ngesikhathi kuqhutshwa ama-bubbles cavitation, ukuvela kwamandla endaweni yakini kubonakala sengathi kunezindawo eziphakeme kakhulu: endaweni yokushisa ephakemeyo (cishe 5,000K) kanye nezingcindezi (cishe 2,000atm) zifinyelelwa. I-implosion ye-bubble cavitation nayo ibangele ama-jets ahlanzekile angama-280m / s velocity. Lapho lezi zinhlobo ezinkulu zingena emanzini, zenza imiphumela ehlukile. Esikhathini samanzi anotshwala, i-ultrasonication ibangela ukusheshisa kwe-oxidation, i-polymerization, nokunciphisa kokuphuza utshwala, i-aldehydes, i-esters, nama-olefini ukwakha ama-compounds amasha adala ukunambitheka okungcono nakakhulu.
Njengama-ultrasonic ezithakazelisayo kunazo zonke zokwenza iwayini (i-vinification), ikakhulukazi i-ultrasound-eyasizwa Ukukhipha, i-agglomeration, futhi ukuhlakazeka kufanele kuthiwe. Lezi zimthelela zenza i-sonication indlela ephumelelayo yokucubungula iwayini nezinye iziphuzo.
Chang, Audrey Chingzu; et al. (2002): Ukusetshenziswa kwamagagasi angu-20kHz ultrasonic ukusheshisa ukuguga kwamawayini ahlukene.
Cocito, C .; et al. (1995): Isiqephu esiphuthumayo sephunga elimakhemikhali ku-must newayini nge-ultrasound.
I-Ghafoor, i-Kashif; et al. (2009): Ukuthuthukisa indlela yokukhipha inhlama ehlanganiswa newayini elimhlophe usebenzisa i-ultrasound.
UHernanz Vila, uDolores; et al. (1999): Ukulungiswa kwendlela yokucubungula i-aroma eyakhiwe ngewayini elimhlophe esebenzisa i-ultrasound.
UJiranek, uVladimir et al. (2007): Amandla amakhulu e-ultrasonics njengethuluzi lamanoveli enikeza amathuba amasha wokuphatha i-microbiology yewayini.
I-Vilkhu, Kamaljit; et al. (2006): Izicelo kanye namathuba e-ultrasound isizinda esisizwa embonini yokudla - Ukubuyekezwa.